Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Nhamba 10 -> Yemasvomhu Signs
Yemasvomhu Signs: [Nhamba 10]
Mosesi akati, “Nhai Tenzi! Imhaka yeiko makandiitira zvakaipa zvakadai? Seiko musingandinzwire tsitsi? Ko zvamatondipazve basa rokutungamirira vanhu vose ava?
Tenzi Mwari wamadzibaba enyu ngaakuwanzei kazana kakazanirana. Ngaakukomborerei sokukutsidzirai kwaakaita.
Turira mutoro wako kuna TENZI iye achaita kuti urambe wakagwinya. Haambobvumira kuti vakarurama vazunguzwe.
Jesu akati, “Baba varegererei nokuti havazivi zvavari kuita.” Vakakanda mijenya kuti vagovane hanzu dzake.
Asi nyika yamava kuyambukira kundotora kuita yenyu, inyika yezvikomo namapani, inonyoroveswa nemvura inoita zvokunaya mudenga,
“Ndibaba vapi pakati penyu vanoti kana mwana wavo avakumbira hove vanomupa nyoka panze pokumupa hove.
mudzinza raBenjamini, torai Abhidhani mwanakomana waGidheoni;
“Endai mutevedze nomumatendhe muchiudza vanhu kuti, ‘Gadzirirai mbuva yenyu nokuti mushure memazuva matatu muchayambuka Jorodhani muchindotora nyika yamuri kupiwa naTenzi, Mwari wenyu kuti ive yenyu.’ ”
Mosesi akataura naHobhabhi mwanakomana waReueri, vatezvara vake vorudzi rwavaMidhiani achiti, “Zvino tava kuzopinda murwendo rwokuenda kunyika yatakanzi naTenzi tichazopiwa. Mwari akatsidzira vaIsiraeri kuti vachabudirira. Saka handei tose. Tichazokupaiwo pfuma yatichawana taveko.”